“Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u cusbooneysiin laheyn heshiiska Pogba” – Solskjær oo farriin u diray kooxda Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 09 Luulyo 2020. Macalinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in maamulka Red Devils ay haatan ka shaqeynayaan in ay heshiis cusub ka saxiixdaan xiddiga reer France ee Paul Pogba.
Dhinca kale tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa tilmaamay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in Paul Pogba uu sii joogi doono kooxda Manchester United.
Magaca Paul Pogba ayaa lala xiriiriyay inuu ka tagayo Manchester United, si uu ugu dhaqaao kooxda Real Madrid, maadaama loo arko in mudo dheer uu bar-tilmaameed buuxa u ahaa macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Pogba ee kooxda Man United, wuxuuna yiri:
“Kama hadli karo wada hadalada Paul Pogba iyo kooxda, laakiin waxaan dhihi karaa Manchester United runtii waxay dooneysaa inay qandaraaska u kordhiso ciyaaryahanka”.
“Waxaan xaqiiqdii rajeynayaa inuu cusboonaysiin doono qandaraaskiisa, waxaana kalsooni ku qabaa awooda aan u leenahay inaan sidaas sameyno, gaar ahaan tan iyo markii uu laacibka ka soo laabtay dhaawaca isla markaana uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah”.
“Pogba wuxuu haatan ku raaxeysanayaa kubada cagta, kaddibna waan arki doonaa waxa dhaca”.